Debanye maka mmemme ngwanrọ beta nke Apple iji nwaa macOS High Sierra | Esi m mac
Debanye maka mmemme ngwanrọ beta nke Apple iji nwaa macOS High Sierra
Nke a bụ mmemme ngwanrọ beta nke anyị niile maara ugbu a na nke dị maka oge niile maka ndị ọrụ niile chọrọ ịnwale nsụgharị beta tupu a tọhapụ ha, na-akọ nsogbu nwere ike ịchọta n'ime ha ka ndị Cupertino nwee ike idozi ha . Oge a nsụgharị ndị dị ugbu a bụ nsụgharị maka ndị mmepe na ndị a anaghị eru ọha na eze, yabụ anyị ga-echere ruo mgbe a ga-ebido n'ihu ọha na njedebe nke ọnwa a nke June.
Na ụdị beta ọhaneze anyị na-ahụ nke ọ bụla n’ime akụkọ ndị egosiri na isi okwu ụnyaahụ yana na nsụgharị maka ndị mmepe gọọmentị. Na nke a anyị nwere webusaiti ịbanye ma nwalee tupu a hapụ ya maka mmadụ niile. Kedu ihe ọzọ Apple na-agbakwunye oge a maka ụdị beta ọha maka tvOS, na-ahapụrụ ụdị beta niile dị naanị maka ndị mmepe enyere ikike.
N'oge ndị a ọha nsụgharị ndị adịghị na dị ka anyị mgbe niile na-ekwu ihe dị mkpa ebe a abụghị iji nsụgharị ndị a na-arụ ọrụ anyị Mac dị ka ha nwere ike ịnwe ụfọdụ chinchi ma ọ bụ ekwekọghị na ngwaọrụ anyị na-eji na anyị ụbọchị ndụ. Tii anyị na-akwado iji nke a raara onwe ya nye nkebi nke gị nwụnye ọ bụ ezie na ihe niile na-arụ ọrụ nke ọma na ọtụtụ ndị ọrụ enweghị mkpesa. Echefula na ndị a bụ nsụgharị beta na ụdị ndị a chọrọ ịrụ ọrụ iji rụọ ọrụ 100%. Ihe kachasị mma bụ na anyị nwere ike iji beta a mara ozi ọma na ọrụ ọhụụ nke sistemụ arụmọrụ gosipụtara na isi okwu WWDC, mana anyị ekwesịghị ime ya dịka OS isi iji zere nsogbu ndị nwere ike.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mac OS X » Debanye maka mmemme ngwanrọ beta nke Apple iji nwaa macOS High Sierra
Apple chọrọ iweta SteamVR na kọmputa Mac ya
2016 MacBook Pros ka enweghị ike ịkwado karịa 16GB RAM mgbe emechara nkwalite